ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း ယာယီကျောင်းခွဲ (ရှမ်းပြည်နယ်)ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားခြင်း ~ ဒီမိုဝေယံ
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း ယာယီကျောင်းခွဲ (ရှမ်းပြည်နယ်)ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားခြင်း
You are cordially invited to the Opening Ceremony of BAYDA Institute (Shan State). BAYDA Institute will conduct CSO, Networking and Democracy (Intensive5days) courses and the ceremony will be opened by BAYDA Institute's director U Myo Yan Naung Thein and officials from the school.
ဗေဒါ သင်တန်းကျောင်းမှ လူငယ်များ၏ အရည်အသွေး မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ ဖြစ်သော လူမှုသိပံ္ပ ဘာသာရပ်ကြီးများကို သင်ကြားပို့ချမည့် ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း၏ ယာယီကျောင်းခွဲ (ရှမ်းပြည်နယ်) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ဗေဒါကျောင်းညွန်ကြားရေးမှူး ကိုမျိုးရန်နောင်သိမ်းနှင့် ကော်မတီဝင်များမှ တက်ရောက် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါ၍ လူကြီးမင်းများအားလုံးကို လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရာ။....။ လောကမာန်အောင် ကျောင်းတိုက်၊ စိန်ပန်းရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့
U Myo Yan Naung Thein , 09 730 21874
U Aung Kyi Nyunt 09 731 41295
ကရင်ကျောင်းသာများရိပ်သာ ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီ (မော်...
သမ္မတရဲ့ဘာလီ အင်တာဗျူးကိုသုံးသပ်ကြည့်ခြင်း (အပိုင်း...
ကျားကွဲရင် ခွေးအ ဆွဲမယ် (ဆောင်းပါးရှင် ထွန်းအောင်...
ဟင်္သာတရှိ ကုန်စည်ဒိုင် ကားဂိတ်များအား မြို့ပြင်သို့...
ယတြာနှင့်အာဏာ အပိုင်း(၂) (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
ပြည်သူဘဏ္ဍာတွေ အလကားဖြုန်းတီးပြီး လယ်သမားတွေရဲ့ လယ်ေ...
“၁၂၆ - ပါတော်မူအတွေး” (တေးထပ်) အရူးပါးစပ်နဲ့ နတ်စ...
"(သမိုင်းကို ငွေနဲ့ ဝယ်လိုသူများ) ဦးခင်ရွှေ မှ စာန...
ပခုက္က္ကူမြို့ ရေဘေးသင့် ကျေးရွာများအတွက် စာရေးကိရိယ...
စားစရာမရှိ ဝယ်စရာရှိတဲ့ ... အဆင်းရဲဆုံး တိုင်းပြည်...
နိုဝင်ဘာလ၂၅ရက်နေ့ က လှိုင်သာယာမှာ ဟောကြားမယ့် ဒယ်အ...
ဒလမြို့ တော်ကြီး စီမံကိန်း ဒုတိယပိုင်း (ဆောင်းပါးရ...
တရုတ်ပြည်မှ ဗုဒ္ဓစွယ်တော် နိုဝင်ဘာလ(၆)ရက်နေ့က နေပြည...
နိုဝင်ဘာလ ၉ရက်နေ့က မန္တလေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သိ...
ကျွန်ုပ်သည် အမြဲတမ်း စေ့စပ်သေချာပါမည်...
ဒဂုံတောင်ကျီစု ကျေးရွာမှ လူမဆန်သောလုပ်ရပ်...
ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေ၏ မီဒီယာသမားများအပေါ် စော်ကားပြောဆိ...
အကြီးအကဲ၏ ယတြာနှင့်အာဏာ (နေရဲနီ)
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ တောင်းစားနေကြသူမ...
ရပ်၍ရွေ့နေသူ (ကဗျာရှင် နေစကြာနိုင်)
(၉၁)နှစ်မြောက် အမျိုးသားနေ့ စာပေဟောပြောပွဲ (တိုကျိ...
ယနေ့ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ နိုင်ငံေ...
ရေဘေးဒုက္ခသည်များထံ “ဒွေး” ရောက်ပြီ..
ယနေ့အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ဘဘဦးတင်ဦး...
ဒလမြို့ တော်ကြီး စီမံကိန်း (ဆောင်းပါးရှင် ဒေါက်တာလ...
ပျောက်ဆုံးသွားသော ကွန့်မာန့်များအား ပြန်လည်ဖော်ပြ...
ရွှေညဝါကျောင်းတိုက်မှာ ပြုလုပ်မယ့် (၉၁)နှစ်မြောက် အ...
နိုဝင်ဘာလ ၁၈ရက်နေ့က အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မြင်ကွင်း၊ လ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်များ၏ ပါတီမှတ်ပ...
“ဥပဒေက ဒီလိုပြဆိုတယ်... လက်တွေ့ဘ၀က ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။...
ခြေစုံပစ်ထောက်ခံရမယ့် အချိန် (ဆောင်းပါးရှင် ဝေမော်...
ဗြိတိန်ဝန်ကြီး၏ ထောက်ကြံ့စစ်သင်္ချိုင်းမှာ ပြုလုပ်တဲ...
အမယ်အို ပိုက်ဆံပျောက်နဲ့ မောင်ကောက် နှပ်သမိုင်းဝင်...
မန္တလေး မဟာဗုဒ္ဓဝင်ဗိမာန်တော်ကြီးမှာ ငြိမ်းချမ်းစွာ ...
ယနေ့မနက်ပိုင်း မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီးအတွင်းမှ...
သင်းသတ်ခံနေရသော မြန်မာပြည် (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ခြင်း...
မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ကျနော်သိထားသမျှ နိဂုံးပိုင်း (ဆော...
ဂျပန်နိုင်ငံရောက် မြန်မာစေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဆူနာမိေ...
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌဦးကျော်သူအား (D.H....
အဝေးရောက် မီးအိမ်ရှင်မိသားစု (စင်္ကာပူ)ရဲ့ မွန်မြတ်တ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံပေးပါ ဆောင်းပါးရှင် (...
ကိုယ်စားပြုသူတွေ အချိန်မှီ ရောက်မလာနိုင်သေးတဲ့ ခုံ...
ရန်ကုန်မြို့၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ၃၆လမ်း(အထက်) လမ...
အမေ့အိမ် ပညာဒါနကျောင်း (လှိုင်သာယာ) ပထမအကြိမ် စုပေါ...
နောက်ဆုံးရ ကချင်ပြည်နယ် သတင်းများ..
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ (၂၇)ကြိမ်မြောက် မသိုးသင်္ကန်း...
လာမည့် အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့မှာ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်...
ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှသံရုံးရှေ့၌ ရခိုင်တိုင်းရင်းသ...
တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင်နဲ့ တောင်ကြီးမြို့ (၆၄)ကြိမ်...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (တောင်ကြီး)ရဲ့ ပထမအြ...
ယူနန်ပြည်နယ် ကူမင်းမြို့က မြန်မာကောင်စစ်ဝန်ရုံး မြ...
``လက်ဆောင်မိုးယံ အာဂအားမာန်´´ (ကဗျာရှင် နေစကြာနိုင...
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း ယာယီကျောင်းခွဲ (ရှမ်းပြည်နယ်)ဖွ...
ပျက်စီးသွားသော သဘာဝဝန်းကျင်များနှင့် ကချင်ပြည်နယ်မ...
၂၀၁၀ အခါလည် (ဆောင်းပါးရှင် အောင်မျိုးထွန်း)
ခေတ်သစ်မြန်မာကို တည်ဆောက်ကြသည့်အခါ (ဆောင်းပါးရှင်...
ခမရ (၃၂၁) လက်အောက်ခံ မို့ဘွမ်ရှေ့တန်းစခန်းမှ မတရား...
အပြစ်မဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေကို မတရားဖမ်းဆီးနေတဲ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များမှ ...
ရှားပါးတိရိစ္ဆာန်များ၊ ရှားပါးသစ်မွှေးများအား တရားမဝ...
စစ်အာဏာရှင်စံနစ်ကို ဇာတ်သိမ်းစေခဲ့တဲ့ နိုဘယ်လ်ငြိမ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းကျခံရသူများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျော...
မြန်မာရေတပ်ရဲ့ အခြေအနေနှင့် အိန္ဒိယနဲ့ နီးကပ်စွာ ဆက...
နစ်နေမန်းဘလော့ဂ်နှင့် ဒီမိုဝေယံဘလော့ဂ် ပြည်တွင်းမှ...
UK သံအရာရှိ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ အမေ့အိမ်ပညာဒါနကျောင်း...
နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေအဖြစ် မတရားအသိမ်းခံရသည့် အင်းစိ...
ဝမ်းနည်းရမှာလား ဝမ်းသာရမှာလား ငိုကျော်ဆန်းရေ...
တန်ဘိုးနားမလည်ကြသူများ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ၏ အစာ...
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကော်မတီမှ သမ္မတကြီးထံ အိ...
ARAKAN ဆိုသောအသုံးအနှုန်းနှင့် ရိုဟင်ဂျာပြဿနာ (ဆောင...
လာမယ့် နိုဝင်ဘာလ၁၄ရက်နေ့မှာ ပြုလုပ်မယ့် လူထုခေါင်း...
တောင်းစားကြသူများ (ကဗျာရှင် နေရဲနီ)
၃၀ရက်နေ့ညက မြို့တော်ခန်းမရှေ့ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု သတင်း...
အမေ့အိမ် ပညာဒါနကျောင်းရဲ့ပထမအကြိမ် စုပေါင်းဘုံကထ...